Investaroonni biyya-alaa mootummaa Woyyaanetti dudda kennaa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Investaroonni biyya-alaa mootummaa Woyyaanetti dudda kennaa jiru
Maqaa investimentiin mootummaan Woyyaanee ummata buqqisaa, garuu investaroota biyyaa fi biyya alaa albuudaa fi lafaan badhaasaati kan ture. Amma garuu, mootummaan Woyyaanee quba miilaan dhaabachuu kan hubatan investaroonni biyya-alaa, investi godhuu osoo hin taane daangaa dhaabatanii haalicha qalbiin hordofuudhaaf dirqamaniiru.
Hunda caalatti, kuni mootummaa Woyyaanee Itoophiyaa dirree investimentii fi tasgabbii godheera jedhaa odeessaa tureef kasaaraa guddaadha. Jalqabatti, Woyyaaneen Doolaara argattu isii dhabsiisa. Gama biraan ammoo kasaaraa siyaasaa kana hin jedhamne isii irra geessa. Bifuma wolfakkaatuun sochii ummataa hordofee seektarri turizimiis hedduu jeeqamuun isaa beekameera. Gargaarsa biyya addaddaa irraa argattus Woyyaaneen dhabaa jirti. Egaa kana hundatu wolitti eda’amee Woyyaanee huqqisaa fi laaffisaa gara boolla awwaalaatti isii gessa.
Dhimmooni diingadeen hedduu wolitti hidhata qaban kunniin ummata nagaa irratti miidhaa tokkos hin qaban jechuun rakkisaadha. Ta’us, ummata biyya isaa irratti ajjeefamu, saamamuu fi haqa isaa sarbamuuf kuni waan guddaa miti. Bilisummaa arguuf ammoo gatiin kaffalamuu qaba. Yeroo heddu gatiin kaffalamu ammoo qaaliidha. Woyyaaneen ganna 17 dhagaa keessa jiraachuu isii ni yaadanna. Nuti dhiibbaa diinagdee fi siyaasaa yeroo kanatti nurra gayuu malu obsaa fi murannon irra aanuu qabna. Obsinaan hawwii yeroo dheeraan wolitti baana- bilisummaa osoo jirru ijaan argina.
haala investimentii itoophiyaa
Previous articleKaabineen Haylamaaram Dassaalenyi geggeeddara maqaa malee jijjiirraa bu’uuraan as hin baane
Next articleKorri Atlaantaa xumurame; milkaayinni isaa ibsa ijjannoo baase hujitti jijjiiruu irratti rarra’a